बच्चालाई जिउँदै बालुवामा गाडेर यौनक्रीडामा लिप्त भएपछि...
एजेन्सी काठमाडौं, २६ माघ
बच्चालाई भगवानको अवतार मानिन्छ । बच्चा देख्नेबित्तिकै आकर्षित नहुने सायदै कोही होला । सबैले बालबच्चा मन पराउँछन् । झन जन्मदिने आमा–बुवा त बालबच्चालाई एकछिन पनि छाड्न चाहँदैनन् ।
तर एक जोडीले यौनक्रिडामा लिप्त हुनका लागि एउटा यस्तोसम्म कार्य गरेका छन् । जसले गर्दा आफ्नै सन्तानमाथि बाबु–आमा यस्तोसम्म कसरी सक्छन् भनेर सबै चकित परेका छन् । जसलाई सुनेर हरेकको मुटु काँप्न सक्छ । र भन्नेछन् आफ्नै सन्तानलाई पनि कसैले क्षणिक आनन्दका लागि यस्तो कुकृत्यसम्म गर्न सक्छन् र ?
एक जोडीले आफ्नो दुई वर्षको बच्चालाई जिउँदै बालुवाको खाडलमा आधा गाडिदिए । केही छिनको रमाइलोका लागि । यो घटनापछि यो जोडी संसारभर निकै आलोचित बनेको छ । यो घटना अर्जेन्टिनाको ब्युनर्स आयर्सस्थित एक बीचको हो । उनीहरुलाई आरोप छ कि आफूले रोमान्स गर्नका लागि २ वर्षको बच्चालाई घाँटीसम्म बालुवामा गाडिदिएका छन् ।
एक प्रत्यक्षदर्शीले प्रहरीलाई खबर गरेपछि यो घटना सार्वजनिक भएको हो । प्रहरी सूचना पाएको ४५ मिनेटपछि बीचमा पुगेको थियो । प्रहरीले बताएको छ कि ‘आफूहरु बीचमा पुगेपछि गर्मी निकै थियो । चर्को घाममा बच्चा तड्पीरहेको थियो र भोकाएको पनि थियो ।’
यद्दपी त्यस्तो अवस्थमा देखेपछि प्रहरीले बच्चाको उद्धार गरिसकेको थियो । साथै प्रहरी यौनक्रीडामा लिप्त जोडीलाई पनि पक्राउ गरेको छ । र महिलाको झोला जाँच गर्दा झोलाभित्र विभिन्न प्रकारका नसालु औषधि पनि फेला पारेको छ ।
बच्चाको त्यो हालत देखेपछि प्रहरी पनि हैरान भएको थियो । सबै हैरान छन् कि उनीहरुले आफ्नै सन्तानमाथि यस्तो व्यवहार किन गरे ? प्रहरीले महिला र पुरुषको नाम सार्वजनिक गरेको छैन । बच्चाका बुबा अर्जेन्टिनाकै हुन् भने आमा प्रागकी हुन् ।
खबर अनुसार उनीहरुको साथमा एक अन्य पुरुष पनि थिए । प्रहरी पुगेपछि उनी भागेका थिए । मिडिया रिपोर्ट अनुसार दुवैको उमेर २९ वर्ष हो । उनीहरुले प्रहरीसमक्ष दिएको बयान अनुसार यौनक्रीडाका लागि बच्चाले बाधा पु¥याएपछि उनीहरुले बच्चालाई बालुवामा घाँटीसम्म गाडेका थिए । एजेन्सीकाे सहयाेगमा
प्रकाशित मिति: आइतबार, २६ माघ २०७६, ०८:१६:००